Intshayelelo Yecandelo 14 | Izifundo ZeBhayibhile Zabantwana
AmaKristu okuqala asasaza iindaba ezilungileyo zoBukumkani nakwezona ndawo zikude zomhlaba. UYesu wawabonisa apho kufuneka ashumayele khona waza ngokungummangaliso wawanceda ashumayela ngeelwimi zabo bantu. UYehova wawenza anesibindi waza wawanika amandla okunyamezela intshutshiso.
UYesu wabonisa umpostile uYohane umbono wozuko lukaYehova. Komnye umbono, uYohane wabona uBukumkani bamazulu busoyisa uSathana yaye buphelisa ulawulo lwakhe ngonaphakade. Wabona uKumkani uYesu elawula nabayi-144 000. Waphinda wabona umhlaba wonke usiba yiparadesi enabantu abakhonza uYehova ngoxolo nomanyano.
Ukwenza umsebenzi esiwunikwe nguYehova kuzisa uzuko kuye
Zinikele kuYehova, uze umbonise ukuba ufuna ukulawulwa buBukumkani bakhe
UYehova makabe nguMhlobo wakho wokwenene
Umoya oyingcwele wabanika waphi amandla awabothusayo abantu?
Iinkokeli ezibulalise uYesu ngoku zifuna abafundi bangashumayeli. Kodwa azizukuphumelela.
USawule lutshaba olungenalusini lwamaKristu, kodwa sele eza kutshintsha.
Kutheni uThixo ethumela uPetros kwindlu yendoda engengomYuda?
Umpostile uPawulos nabo wayeshumayela nabo baqalisa lo msebenzi kwiindawo ezikude.
Kuthiwani ngedemon, inyikima nekrele kweli bali?
Amadoda amabini asebenza kunye futhi angabahlobo yaye akhonza kunye iminyaka emininzi.
Uhambo lwakhe luneengozi, kodwa akukho zingxaki zinokutyhafisa lo mpostile.
UYesu umbonisa imibono emininzi ngekamva.
ISityhilelo sikaYohane sibonisa indlela uBukumkani bukaThixo obuza kubutshintsha ngayo ubomi emhlabeni.